FAAYIII - Pool Rusee-sabaaginaa mana murtiitti dhihaachun booda harki isaa yeroo hidhamu, Kigaalii, Rwaandaa, Fulbaana 14, 2020
Gooti fiilmii “Hotel Ruwaandaa” jedhamuu Pool Rusee-sabaaginaa Kigalii keessatti dogoggoraan hidhamee hidhaan waggoota 25 itti maramuu isaa Yunaayitd Isteetis kaleessa beeksistee jirti.
Yunaayitid Isteetis keessaa eeyama jireenyaa dhaabbataa fi lammummaa Beljiyeem kan qabu Rusee-sabaaginaa-n prezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaameen Abbaa irree ti jechuun qeequu dhaan himannaan shorokeessummaa irratti dhiyaatee adabbiin itti murame.
Dubbi himaan Ministriin dhimma alaa Yunaayitid Isteetis, Rusee-sabaaginaa-n dogoggoraan hidhamuu isaanii kan dhimmicha hordofu waajjirri dhimmootii qoonsilaa ni amana jechuu dhaan dubatan.
Ministrichi, haala walii gala jiru yaada keessa galchuu dhaan keessumaa dhaddacha sana irratti adeemsi murtii sun kan haqaa akka hin ta’in dubbatee jira.
Dhimmi isaa kan isa yaaddesse ministriin dhimma alaa nama kana hiksisuuf akka hojjetu gaafatee jira. Kan manaajera hoteela Kiigaalii turan Rusee-sabaaginaa-n, ennaa fixiinsa sanyii Ruwaandaa kan bara 1994 lubbuu hedduu du’a oolchuu isaaniif kan faarfaman yoo ta’u, tarkaanfiin isaanii kun illee fiilmii Hollywood-tti hojjetame kan “Hotel Rwanda” jedhamu akka hojjetamuuf sababaa ta’ee jira.
Hagaya bara 2020 erga xayyaarrii isaan keessa turan kan silaa Burundiitti balal’iuun irra ture Kigalii erga qubate to’annaa jala oolanii hanga ammaa hidhaa keessa jiru.
Maatiin isaanii, waajjirri dhimmootii qoonsilaa kan dhimma kana hordofu Yunaayitid Isteetis Ruwaandaa irra dhiibbaa kaa’uu dhaan akka isaan gad dhiisaman ni taasisa abdii jedhu qabaachuu isaanii beeksisaniiru.
Irra hedduu immoo fayyummaan isaanii gad adeemaa waan dhufeef Yunaayitid Isteetisii fi kanneen biroo dhaan waa yoo hin godhamin, mana hidhaa keessatti du’uu malu yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii illaa dubbataniiru.
Kan umuriin waggaa 67 fi dhibee kaanserii irraa kan dandammatan Rusee-sabaaginaa-n dhiyeenya immoo yeroo lama sammuu isaanii keessatti dhiigi kan argame yoo ta’u, kanneen dhiyeenya isaan daawwatan harka isaanii bitaa irra dhukkubbii qabaachuu ibsanii jiran. Maatiin isaanii dhiyeenya, Kagaamee fi mootummaan Rwaandaa akkasuma angawoonni kanneen biroon ukkaamsanii isaan butuu dhaan dararan jechuu dhaan Yunaatitid Isteetis keessatti himannaa doolaara Miliyoona $400n dhiyeessanii jiran. Rusee-sabaaginaa-n baatii fulbaanaa keessa garee ripxe loltootaa kanneen bara 2018 fi 2019 Ruwaandaa keessatti haleellaa boombii harkaa, qawwee raawwatanii fi manneen guban waliin hidhata qabu jechuun himataman.